अनसन स्थलबाटै मध्यरात काठमाडौं लगिँदै डा. केसी र विजयलाई - Purbeli News
अनसन स्थलबाटै मध्यरात काठमाडौं लगिँदै डा. केसी र विजयलाई
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ०४, २०७५ समय: ०:२२:०४
झापा/ फरक फरक माग राखेर डा. केसीसहित सत्याग्रहमा बसेका दुई व्यक्तिलाई नै सरकारले मध्यरात काठमाडौं लगेको छ । ९ दिनदेखि आमरण अनसनमा वसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि राति नै सरकारले डा केसीलाई काठमाडौं लान हिँडाएको छ । त्यस लगत्तै सरकारकै निर्देशनमा १० मिनेटपछि अर्का आमरण अनसनमा वसेका विजय थापालाई पनि अनसनस्थलबाट काठमाडौ लानका लागि झापा तर्फ ल्याइदै छ ।
डा. केसी ९ दिनदेखि इलाममा अनसनरत छन । विजयपनि ६ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । डा केसीको बिहीबार साँझबाट मुटुको चाल अस्थिर भएको छ । चिकित्सकहरुले कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने बताएपछि राजधानी ल्याउन पहल सुरु भएको थियो । दुवैलाई इलामबाट भद्रपुरसम्म एम्बुलेन्समा ल्याइदै छ । भद्रपुरबाट डा केसी र थापालाई सेनाको नाइटभिजन हेलिकप्टरले काठमाडौं लाने तयारी भएको झापाका प्रहरी प्रमुख भीम ढकालले जानकारी दिए ।
रात परिसकेकाले इलाममा हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्ने अवस्था नरहेपछि इलामबाट भद्रपुरसम्म एम्बुलेन्समा उनीहरुलाई ल्याएको र भद्रपुरबाट सेनाको नाइटभिजनले काठमाडौं लगिने बताइएको छ ।डा. केसीलाई भेट्न बिहीबार मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, केदारभक्त माथेमाको टोली इलाम पुगेको थियो ।
डा केसीको जस्तै आर्का आमरण अनसनमा रहेका थापाको पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई पनि सरकारले काठमाडौं लगेको थापाकाज सहयोगी पुष्प भण्डारीले बताए । उनीहरु दुईलाई महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिने वुझिएको छ ।
झापामा अपराधको जालो : बिप्लका कार्यकर्ता पक्राउ परे पालै पालो
प्रमाणपत्रका भरमा आयुर्वेद क्लिनिक : कविराज र वैद्यले जाँच्छन् विरामी
आयुर्वेद उपचार पद्दतिमा ब्रह्रलुट : उपचारको क्रममा महिलाको मृत्यु, नियमनकारी निकाय बेखवर
घर पाउँदा नाँचगान : ३४ विपन्न परिवारलाई नयाँ घर, सन्थाल बस्तीमा खुशीयाली (तस्विरहरू सहित)
जसले गरे एयरपोर्टमा यति ठूलो परिर्वतन